I-Semalt ifaka i-Web Effect Tooling Tool
Abantu sele besazi ukubaluleka kwe ukukhwa kwewebhu , ngoko kukho imfuneko enkulu. Ngenjongo yokungena imali kwiimfuneko, ezininzi iinkqubo ze-web scraping ziye zaphuhliswa. Ezinye zazo zinokudikibalaza i-drawback okanye enye.
Enyanisweni, ezinye iinkampani kufuneka zizame izicelo ezininzi ngaphambi kokuba zikhubeke kumntu ofanelekileyo shishini labo. Nantsi ingcebiso kuwe - bticino serie matix prezzi. Zama i-Website Extractor 9. 62, kulula ukuyisebenzisa isicwecwe sewebhu software.
kunye ne-Extractor ye-Website. 62, kulula ukukhuphela i-website yonke kwaye ulondoloze yonke into ekhompyutheni yendawo yangoku. Iisayithi ezilandiweyo zingasetyenziselwa kwaye zisetyenziselwe njengoko zisele zigcinwe kunye zazo. Ezinye iinkalo ezikhangayo zenkqubo ziye zaxutyushwa ngezantsi.
Ikhono lokukhahlela ngamaphepha angamakhulu ali-100 ngexesha elilodwa
Into enye emela esi sixhobo ngaphandle kwayo. Iyakwazi ukukhuphela kwii-web pages ezilikhulu, imifanekiso, imifanekiso, kunye nezinye iindidi zedatha ngexesha elilodwa. Kwakhona kunakho ukukhuphela iifayile kwiiwebhusayithi ezininzi ngexesha elifanayo. Kuphela kufuneka udwelise zonke ii-URL ezijoliswe kuzo.
Ngamanye amaxesha ungadinga kuphela umxholo othile kumaphepha ewebhu ekujoliswe kuwo. Esi sixhobo sinokukunceda njengoko iyakucoca kuphela umxholo ofunekayo kumaphepha ewebhu. Ngamanye amagama, i-Web Extractor 9. 62 ikwabonelela ngezinga eliphezulu lokuchaneka.
ixesha lemizuzu engama-30
Kakade, uvumelekile ukuba uzame emva kweentsuku ezithile ukuba unqume ukuba uthenge okanye awuyi. Yingakho iza nexesha lokuvavanywa kweentsuku ezingama-30. Iyayeka ukuphendula emva komhla wama-30 ngaphandle kokuba uyithenge.
Kusebenza ngeenguqu ezininzi zeenkqubo zeWindows. Ixhasa iWindows Vista, 2003, 95, XP, Me, 2000, NT kunye neWindows 98.
Ubukhulu obuncinane Ubukhulu bayo bungama-662 kuphela. 62KB. Akunakwi-1 MB. Ngoko kuya kuthatha kuphela inani elithintekayo lokugcina indawo kwi-hard drive yakho. Oku kubaluleke kakhulu kuba abantu ngoku basebenzise izixhobo zabo zokugcina ngokucokisekileyo. Zikhetha izicelo ezincinci. Esi sizathu esinye sokuphakamisa le nkqubo. Ukuxhaswa kobuchwepheshe be-intanethi Xa usebenzisa, unakho ukuhlangabezana nemingeni ethile. Yingakho le nkqubo ihamba ne-24/7 inkxaso yezobuchwepheshe kwi-intanethi. Unokuhlala ucela uncedo kwiqela layo loxhasi lobugcisa nanini na nanoma yimiphi imini.
Unokwenza izinto ezingaphezulu kwe-100 zeenkcukacha ngokukhawuleza
Ingakwazi ukukhahlela iiwebhusayithi ezininzi
Ubuncinane besayizi (662. 62KB)
Ixhasa iWindows 98, NT, 2000, Me, XP, 95, 2003, kunye neWindows Vista
Inenkxaso yezobuchwepheshe kwi-intanethi
Kutheni benzise ithuba lokuvavanya ixesha lokuzama ukuva njani? Ikhululekile ngokupheleleyo, kwaye awunyanzelekile nayiphi na indlela yokuyithenga emva kwexesha lokuvavanya. Ngamanye amazwi, awunanto yokulahlekelwa ngenxa yokuzama.